ISundowns idlulele kwi-CAF last 16 | Scrolla Izindaba
ISundowns idlulele kwi-CAF last 16
IMamelodi Sundowns ibe yiqembu lokuqala kule sizini kwi-CAF Champions League ukuthola amaphuzu kulo mqhudelwano wokugcina wamaqembu ayi-16. IDowns ishaye iTP Mazembe ngelilodwa eqandeni e-Loftus Stadium ngoLwesibili ebusuku ukuze bagcine nokudlala kahle kwabo ku-Group B.
Ngemuva kokunqoba yonke imidlalo emine eqenjini bathole amaphuzu ayi-12. Baphinde balula umjaho wabo wokungahlulwa emidlalweni engama-25 kuyo yonke imincintiswano kule sizini.
Igoli likaLebohang Maboe esiwombeni sokuqala liqinisekise ukuthi iDowns izodlala neqembu elinemidlalo emibili esasele. Iqembu lase-Tshwane yilona kuphela iqembu ku-Group B eliwinile njengoba i-Al-Hilal, iCR Belouizdad kanye neMazembe bonke kusamele benqobe.
Omunye umdlalo ka-Group B odlalwe ngoLwesibili phakathi kwe-Al-Hilal kanye neBelouizdad uphele zibambene ngamagoli. I-Al-Hilal kanye neBelouizdad banamaphuzu amathathu neMazembe esezansi ngamaphuzu amabili.
Umdlalo olandelayo weSundowns ka-Group B uzobe use-Al-Hilal mhla zi-2 kuMbasa.
Khonamanjalo e-Angola, iKaizer Chiefs ilahlekelwe yithuba elihle kakhulu lokungena endaweni yesibili ku-Group C ngokudlala ngokulingana nePetro de Luanda ngoLwesibili ebusuku. Leli qembu belizimisele ngokuqopha ukunqoba kwabo kokuqala esigabeni samaqoqo kule sizini nangenkathi beziphindiselela ngokunqotshwa kwabo iqembu leChiefs ngamabili eqandeni muva nje ngesonto eledlule.
Ngakolunye uhlangothi iChiefs, ibizimisele ukukhulisa amathemba ayo okufinyelela kuma-quarter-final ngokuphinde bahlule iPetro de Luanda. Kepha bebe ngenzi kahle phambi kwamapali kodwa ekugcineni babelana bonke ngenjabulo nePetro de Luanda, ethole amaphuzu ayo okuqala ku-Group C.
Iphuzu elitholwe Amakhosi e-Angola liwaholele emaphuzini amahlanu, okusho ukuthi asehleli endaweni yesithathu. IWydad Casablanca ihleli esicongweni.
Ukushaya kwabo amagoli ngesikhathi bedlala neHoroya ngoLwesibili ebusuku kubaholele emaphuzwini ayishumi. Ngakolunye uhlangothi iHoroya isele endaweni yesibili ngamaphuzu amahlanu.
Ukuhlangana okulandelayo kwaMakhosi kuleli qoqo kuzoba lapho bezokwamukela iWydad mhla zi-2 kuMbasa. Kodwa ngaphambi kwalokho, banosuku olubalulekile nezimbangi zabo ezinkulu i-Orlando Pirates emdlalweni wase-Soweto kulo Mgqibelo ozayo.